Guddida Ka-Soo-Kabashada Abaaraha oo maanta ku kulmay Madaxtooyada iyo Warbixinno laga dhegaystay Xubno Ka Mid ah | Somaliland Post
Guddida Ka-Soo-Kabashada Abaaraha oo maanta ku kulmay Madaxtooyada iyo Warbixinno laga dhegaystay Xubno Ka Mid ah
Hargeysa (SLpost)- Guddiga ka-soo-kabashada Abaaraha ee dhawaan madaxweynuhu magacaabay, ayaa maanta kulan ku yeeshay madaxtooyada, waxaana halkaas warbixinno lagaga dhegaystay xubno ka tirsan Guddiga oo isku soo dubba-riday tallaabooyinka ay qaadeen iyo hiigsiga ay rejaynayaan.
Sidaasna waxa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Afhayeenka madaxtooyada, kaas oo lagu faahfaahiyey nuxurka kulankaas iyo waxyaabihii lagu soo qaaday.
War-saxaafadeedka ayaa u qornaa sidan: “Guddida ka soo kabashada abaaraha oo weli ku gudo jira dedaalkoodii qaadhaan ururinta ayaa kulan ku yeeshay maanta oo ay taariikhdu tahay 01.06.2017 madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland, waxaanu kulankaasi daba socday kulamadii hore ee guddidu sida joogtada ah marwalba ugu kulmi jireen qasriga madaxtooyada.
BAANKA DHEXE: 880
Ugu danbayntiina waxay guddidu waxay dardaaran iyo fariimo u sii dhiibeen xubno ka mida guddida oo iyagu safar la xidhiidha hawsha qaadhaan ururinta ugu bixi doona beri oo jimce ah imaaraadka carabta iyo kuwait sidii ay horeba u shaaciyeen guddidu, jaaliyadaha ku dhaqan dalalkaana waxa loogu baaqayaa inay guddida la shaqeeyaan inta ay la joogaan oo ay kaalintooda ka soo qaataan qaadhaan ururinta.” Sidaas ayaa lagu sheegay war-saxaafadeeka.